कथा Archives - sailungonline
१. मलामी आज एक्कासी दुर्घटनामा परेर उ मर्यो । घरपरिवार, आफन्तजन, शुभचिन्तक, चिनेजानेकाहरुको भीड घाटमा पुग्यो । मलामीहरुको ठूलो भीड देखेर मलामीमध्येको एउटाले भन्यो- ‘लौ हेर्नुस त ! उहाँले कत्रो सम्मान पाउनु भयो । यति ध...
वसन्त भिडियो पार्लरको मालिक केटो दुर्घटनामा परेर मरेको लगभग एक महिनापछि पनि दोकानमा ताल्चा नै मारिएको छ। गरिबी रेखादेखि मुनिको परिवारको मुखिया वसन्तको इहलीला सकिएपछि हातमुख गाँस्न पनि धौधौ पर्नथाल्यो उर्मिलाकी छोरी उदीप्...
निरन्जनले चिनेन मलाई। [समस्या र समय‌ अलग-अलग हुँदैन। एकै हो। सामाजिक भौतिक व्यक्तिगत पारिवारिक र आर्थिक नै हुन। समस्या अझै आफ्नो केरियर‌, हबी र सांसरिक सञ्जालले बाँधेको छ‌ चारैतिर। यसको‌ समाधान चाहान्छ मानिस जसको कारणले...
माघको बेला थियो । जाडो छल्न आजजस्तो हामीसँग न्यानो लुगा हुँदैनथ्यो त्यसबेला । जसका कारण घाम लागेपछि घरभन्दा मास्लो बारीको सिर्कोमा घाम ताप्न उक्लन्थ्यौं । कुँडुले गाउँ रामपुर खोलाको किनारमा परेका कारण एकातिर डाँडाले छेके...
कान्छो हजुरबाको जीवनमा घटेको यो कथा मेरो हजुरआमाले सुनाउनुभएको थियो । यो २००३ सालको कुरो हो । त्यतिबेला देशमा राणा शासन थियो । कान्छो हजुरबा त्यतिखेर १३ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । सबै जहानहरु साँझको खाना खाइवरी घरको तल्लाम...
दिनहरू असाध्यै रमाइलो थियो । जाडो सकेर फागुनले आफ्नो तातो अनुहार फैलाएको हप्ता दिन पुग्दै थियो । प्राणी र मान्छेहरूमा न्यानोपन बढ्दै थियो । माइगेन पनि फुर्सदमा थिइन् । भखरै एसएलसी सकेर घरमा आएकी थिइन् । बस्तुभाउ लिएर मरि...
‘आमा खै... अँ...’ पुक्क परेका गाला, चिम्सा आँखा, थेप्चो नाक तर फराकिलो निधारकी माया आफ्नो घाँघरको फेर निहुरिएर नियाल्दै भन्छे । यस्तै तीन वर्षकी होलीन् म अनुमान लाउँछु । भर्खरै मैले ल्याईदिएकी घाँघरमा माया पुतली जस्तै...
‘बिक्नै छाडे, अब के गर्ने होला ?’ छेवाङले निगालोको भारी आँगनमा फाले । छेवाङको पिँढी डोको र नाङ्लोले भरियो । तर किन्ने मान्छे आएनन् । निगाले गाउँका धेरैजसो सहर पसेकाले उनको डोकोनाङ्लो, थुञ्चे बिक्न छाडे । उनले जानेको स...